Video Editor Fast: Sida loo Edit Video hab Fast o
> Resource > Video > Fast Video Editor: Sida loo Edit Video hab Fast
Raadinta video editor u soomi isla sameeyo video kaamil ah ka clips aad u xoqdo lagu wadaago? Tixgeli u sameeyeen. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) waxay bixisaa xal dhameystiran si ay u dhisaan duubey iyo bandhig xirfadeed-raadinta ka videos iyo sawiro maalin walba. Muuqaalada Gaarka ah waxaa ka mid ah:
Taageerada oo dhan video, audio iyo sawir qaabab loo jecel yahay,
Xoog video tafatirka on Timeline kaas oo bixiya gacanta ku loox;
300+ ilaha bilaashka ah ee sida diirada muuqaal ah, qoraalka, kala guurka, saamaynta dhawaaqa diyaar u ah inuu soo jiito.
Dalbashada saamaynta qabow sida usii-wareeg, humaag, jeexan boodi, fool-off, iyo in ka badan oo la click fudud.
In socda, waxaan arki doonaa qaadataa version Windows sida tusaale si ay u sharxaan sida loo sameeyo filim kalifaya si fudud oo dhaqso. Users Mac sidoo kale raaci karaan tallaabooyinka ka mid ah, kaliya loo hubiyo in aad soo bixi version saxda ah:
Waxaa Launch dooro muuqa "16: 9" ama "4: 3" inay galaan suuqa kala hoose. The deg deg video editor qoreysa interface aad u dareen leh, si aad u qaadan doonaa markii ugu yaraan in loo isticmaalo, waxa uu. Si aad u dajiyaan aad videos, laba siyaabood oo wax ku ool ah oo loo bixiyo:
1) Click "Import" in ay arbushin ilaa suuqa kala caleenta ah in ay doortaan faylasha aad rabto oo iyaga ku shuban in Dufcaddii.
2) Jiid jeedi videos ka folder file aad si toos ah ay suuqa kala hoose.
Ka dib marka aad ku shuban oo dhan files si habsami leh, waa inaad ku labanlaabtaa karaa guji video clip ah si ay u arkaan in uu furmo xaq previewing ah. Si xor ah qaadataa snapshots ah goobaha aad jeceshahay in video ah adigoo riixaya "Camera" icon.
2 Edit video si hufan
Jiid oo hoos u files warbaahinta si aad u Timeline ah, ka dibna ka hor si xaalkaa video degdeg ah oo dhan qalab ku anfacaya.
Goo, dalagga, isku shaandheyn, kala
Sida hoos ku qoran, dhammaan qalabka tafatirka video aasaasiga ah soo haan adigoo gujinaya fursadaha in toolbar ama mouse click midig. Uma baahnid in aad aqoon u leedahay wax-soo-saarka ee post filim, kaliya soo qaado qalab aad u baahan tahay iyo waxa ka codsan meeshii. Waxa kale oo ay bixisaa suuqa kala dhinac-ilaa-dhinac previewing ah, waxa aad aragtaa waa waxa aad u hesho. Haddii aan xaq, tirtireyso / ogalanaya howlgalka fudayd.
Codso kala guurka iyo saamaynta ay ku jiididda iyo hoos u dhac
Iyadoo foom oo dhammaystiran oo lacag la'aan ah oo ku saabsan qoraalka, Intro / credits, kala guurka, saamaynta, Liiska Forbes, iyo dhawaaqa bixiyo, waxaad ka jafi kara video waqti. Si fudud soo qaado aad saamayn ugu jecel yahay, ka dibna jiidi oo hoos u meel aad rabto. Haddii aad u baahan tahay si aad u dalbato kala guurka isla dhexeeya dhan clips, kaliya xaq guji dooro "ayaa waxay khuseeyaan dhammaan". Aad u sahlan oo degdeg ah, sax?
3 wadaag abuurka isla markiiba
Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u muujiyaan aad masterpiece. Iyadoo fursadaha dhoofinta kala duwan ee la bixiyo, waa super fudud oo degdeg ah si ay u daabacaan aad video online. Guji "Abuur" si ay u helaan suuqa kala saarka, halkan waxaad:
1. cadaadi oo geliyaan aad video in YouTube, Facebook, Twitter ama si toos ah app this
2. Waa inuu ku gubaa si disk DVD loo qaybiyo la soomo.
3. Waa badbaadi oo dhan qaabab loo jecel yahay inuu u ciyaaro la Windows Media Player ama QuickTime ciyaaryahan on your computer.
4. Siin qaab qaybiyay ciyaartoyda aad Xararad sida iPhone, iPad, HTC, iwm oo lagu wareejiyo waa inay si degdeg ah.
Taasi waa! Hadda download tijaabo ah oo lacag la'aan ah ka hooseeya si loo hubiyo waxa aad yeelan doontaa in ay ka samaysaa this movie gaare quruxsan degdeg ah.
Best 10 Goobaha si Download Music Video Free
Xalka Avidemux No Sound